eNasha.com - निखिलले गीत गाउने
निखिलले गीत गाउने
बलिउडमा आमिर खान, सञ्जय दत्त, अभिषेक बच्चनजस्ता सङ्गीतसँग कुनै साइनो नै नभएका व्यक्तिहरुले गाउनु हुन्छ भने सङ्गीतसँग टाढैको भए पनि नाता भएका हाम्रा नायक निखिल उप्रेतीले गाउनु हुँदैन भन्ने छ र ?
मेरो भावनासँग ठ्याक्कै मेल खाएकाले होला, अहिलेका हट नायक निखिल उप्रेतीले पनि गीत गाउने भएका छन् । उनलाई गीत र सङ्गीत नेपाली चलचित्रका लोकप्रिय सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीले यो अवसर उपलब्ध गराउने छन् ।
घटना विवरणअनुसार, चलचित्र 'शक्ति' को गीत रेकर्डिङको क्रममा नायक संयोगवश स्टुडियो पसेका थिए । त्यहाँ सङ्गीतकार अधिकारीले गीतको 'डमी' रेकर्ड गराइरहेका थिए । रमाइलो गीत भएकाले रेकर्डिङ हेर्दाहेर्दै नायक उप्रेतीलाई गीत याद हुन पुग्यो र सङ्गीतकारका अघिल्तिर गुन्गुनाउन पुगे । उनको गुन्गुनाइ सङ्गीतकार अधिकारीलाई यति आकर्ष लाग्यो कि 'डमी' गाउन कर गरे । 'डमी'मा निखिलको 'स्केल' र 'पिच' मिलेपछि सङ्गीतकार अधिकारी उनलाई गायक बनाउन हात धोएर पछि लागेका छन् ।
सङ्गीतकारले आफूभित्र रहेको नयाँ खुबी चिनेपछि निखिललाई रमाइलो लाग्नु स्वाभाविक थियो र अहिले उनी सङ्गीतकार अधिकारीले लेखेर सङ्गीत तयार पारिदिएपछि बिहानबिहान रियाज गर्न थालेका छन् ।
सङ्गीतकार अधिकारीले गीत यस्तो तयार पारे कि जस्तातस्ता गायकले पनि गाउन सक्तैनन् । गीतको अभ्यास गर्दागर्दै नायक उप्रेतीको पेटै दुख्न पुगेको थियो । 'त्यति गाह्रो रै'छ', नायक उप्रेतीले भने- 'तर मलाई यस्तै चुनौतिपूर्ण काम मन पर्छ । मलाई यही अप्ठ्यारोपन मन परेर नै गाउन लागेको हुँ ।
त्यसो त पाठकहरुले सोच्नु भयो होला, निखिल र सङ्गीतको टाढाको साइनो कसरी पर्न गएछ ? लौ सुन्नुस्, निखिलकी श्रीमती कोपिला विगत सात वर्षदेखि लगातार सङ्गीत सिकिरहेकी छिन् र उनको पनि गीति एल्बम चाँडै नै बजारमा आउँदैछ । निखिलले गाएको यो गीत श्रीमती निखिल (कोपिला) को एल्बममा अटाउने छ । कोपिलाको त्यो एल्बमका लागि पहिलो चरणमा तीन गीत रेकर्ड गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब तपाईँ यो नसोध्नुस्, यो एल्बममा ती तीन गीतका लागि कसले सङ्गीत दिइरहेको छ ? उही सुरेश त हुन् नि !
निखिल श्रीमती कोपिलाको साथमा
पेज थ्री अभिनेता प्रविधि सुटिङ हल्ला सेलेब्रिटी रिलिज अभिनेत्री सेक्स समारोह